Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့(18 များအတွက်စုစုပေါင်း Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ ထုတ်ကုန်များ)
Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
ရေချိုးနိုင်သော polyester ဒြပ်ဆေးရွက်ကြီးမြေမှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: အိတ်အမျိုးအစားကောက်ခံရေးကြိုက်သောဖြစ်ပါတယ် , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးစက်ရုံ , ဆေးရွက်ကြီးဖုန်ကောက်ခံရေး
tag ကို: flat Bag Filter ကို , စက်မှု Counterblow Filter ကို , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Bag Filter ကို
ZC- II ကို / III ကိုစက်မှု rotary ပြောင်းပြန်ထိုးနှက်ပြားချပ်ချပ်အိတ်မိုးရွာသွန်းမှုအသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို: ZC- II ကို / III ကို type ကိုစက်မှု rotary ပြန်ထိုးနှက်ပြားချပ်ချပ်အိတ် duster (အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း)...
ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းတွင်အဘို့အ polyester ဖိုင်ဘာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်
tag ကို: ဘိလပ်မြေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အိတ် Filter ကိုအိတ် , polyester ဖုန် Bag , ဘိလပ်မြေထောက်ပံ့ Filter ကို Bag
ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းတွင်အဘို့အ polyester ဖိုင်ဘာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ အဆိုပါ filter အိတ်လေးအိတ် filter ကို၏စစ်ဆင်ရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် cylindrical filter...
non ယက်အပ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအတွက်ဖုန်ငွေကောက်ခံ Antistatic ဖုန် Filter ကိုအိတ်ခံစားခဲ့
tag ကို: Antistatic ဖုန် Filter ကိုအိတ် , ဆန့်ကျင်ရေနံနှင့်ရေစိုခံ Filter ကို Bag , မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်စက်မှု Filter ကို Bag
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် Filter အိတ် function အခါဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်မှတဆင့်။ အဆိုပါမြေမှုန့် filter ကိုအိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စင်ကြယ်ဓာတ်ငွေ့ကွယ်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ filter...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ PPS စက်မှုဇုန် filter ကိုခံစားခဲ့ရ (filter ကိုအိတ်) needled PPS ဖိုင်ဘာလုံးဝပြင်းထန်မှုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မူလကပင်ဓာတုဗေဒပွားဘွားခြင်း, စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သောပတ်ဝန်းကျင်အကြားကောင်းသော filtration စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမစောင့်,...
polyester dustproof filter ကိုအိတ်
tag ကို: polyester Air ကို Filter ကိုအိတ်ခံစားခဲ့ , လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေး Filter ကို Bag , ဖုန် Filter ကိုအိတ်၏အိတ် Filter
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ polyester filter ကိုအိတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမဟုတ်မှသာထုတ်ကုန်ဖြစ်စေလျက်, ကွဲပြားခြားနားသောဒဏ်ငွေ polyester ဖိုင်ဘာ filter ကိုပစ္စည်း gradient ကို type ကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာသို့လုပ်ကိုရှေးခယျြဘုံမြင့်မားသော voidage,...
ဖုန်မှုန့်အိတ် polyester filter ကိုအိတ်
tag ကို: Filter ကိုဖုန် Filter ကိုများအတွက် Bag Filter , စက်မှုယက် Bag Filter , ဆေးထိုးအပ် polyester Filter ကို Bag
ခိုင်မာတဲ့ polyester ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်
tag ကို: ဒြပ် Fiber Filter ကို Bag , ဖုန်စုပ်စက် Filter ကို Bag , Aramid polyester Filter ကို Bag
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ အဆိုပါ filter အိတ်သာမန်များ၏ထူးခြားသော charastic filter ကိုအထည်, ကောင်းမွန်သောဝေဟင် permeability နှင့်ရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်ဘဝမြင့်မားထိရောက်မှုဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝခံစားခဲ့ရသိရသည်။...
အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ polyester / PE ရေနှင့်ရေနံတွန်းလှန် filter ကိုအိတ်:
tag ကို: ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖိုဂတ်စ် Filter ကို Bag , အလတ်စားကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖို Bag , ဖုံးလွှမ်းအပ်ပိတ်စအိတ်ခံစားခဲ့
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက် ဖန်ဖိုင်ဘာ filter ကိုပစ္စည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်, ရေနှင့်ရေနံတွန်းလှန် flumes filter ကိုအိတ်သိသာ wear ခုခံ, flexural အစှမျးသတ်တိနှငျ့ခွံအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဓာတုဖိုင်ဘာ filter ကိုပစ္စည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကဓာတုဖိုင်ဘာ filter...
ရေအထောက်အထား polyester ဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်
tag ကို: Filter ကိုစာနယ်ဇင်းများအတွက် Bag Filter , ကျောက်မီးသွေးဖြင့်ပစ်ခတ်ဘွိုင်လာပိတ်စ Bag , Thermal Power ကစက်ရုံများအတွက် Bag Dusting
သငျသညျ Jian သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကုမ္ပဏီအားဖြင့်ခံစားခဲ့ရအဆိုပါ filter PE polyester တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် filter ကို, Ltd ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အကြီးစား polyester အဓိကဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။...
hot ရောင်းလေဟာနယ် polyester သန့်စင် filter ကိုဖုန်မှုန့်အိတ်
tag ကို: Antistatic ဖုန်ငွေကောက်ခံ Bag , 729 Dedusting Device ကို Bag , ဆန့်ကျင် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု Bag
အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ အိတ် filter ကို, ဒဏ်ငွေခြောက်သွေ့မဟုတ်တဲ့ fibrous ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းများအတွက်သင့်လျော်သောအရာခြောက်သွေ့ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ filter အိတ်အထည်အလိပ် filter ကိုအထည်ဖန်ဆင်းထားသည်သို့မဟုတ်မဟုတ်သောအထည်အလိပ်ခံစားရတယ်,...
tag ကို: ကျောက်ခေတ်ဖုန် Filter ကို Bag , မိုင်းဖုန် Filter ကို Bag , acrylic ဖုန်မှုန့်အိတ်
အထည်အိတ်၏ရှည်လျားသောဘဝလေးသောဒြပ်စင် 1. သင့်လျော် filter ကိုပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ အဆိုပါ filter ပစ္စည်းအပူချိန်, အပူချိန်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏ဓာတုဝိသေသလက္ခဏာများ, အရွယ်အစား, အလေးချိန်, ပုံသဏ္ဍာန်, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု pecking,...
အရည်အသွေးကောင်း 80% polyester လေဟာနယ်သန့်စင်ဖုန်မှုန့်အိတ်
tag ကို: Trapezoid ဖုန်မှုန့်အိတ် , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်အိတ် , flat Bag အိတ်
ယက် filter ကိုအထည်, ဖုန်မှုန့်အိတ်, nonwoven filter ကိုအထည်နှင့် duster filter ကိုအိတ်: အအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းအရ, ကအဓိကအားဖြင့်သုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ 1, ယက် filter ကိုအိတ် filter ကို:...
tag ကို: Fluomez အမြင့်အပူချိန်အပ်ခံစားခဲ့ , PPS အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Dedusting Bag , ဖုန်ထူ Dacron Bag
အမြိုးခှဲခွားခွငျး ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းအိတ်အပူချိန်နှင့်ပစ္စည်းနှင့်အညီကွဲပြား တဦးတည်းပုံမှန်အပူချိန်အထည်အိတ်: ပုံမှန်အပူချိန်အထည်အိတ်အဓိကအားဖြင့်လေကောင်းလေ permeability ချောမွေ့မျက်နှာပြင်, ကောင်းသောရှုထောင်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အတူမဟုတ်တဲ့ချည်ငင်,...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆန့်ကျင် - ငြိမ်ဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်
tag ကို: anti-ငြိမ်ဖုန်အိတ်ထုတ်လုပ်သူများ , anti-ငြိမ် polyester အပ်ခံစားခဲ့ , anti-ငြိမ်ဖုန် Filter ကို Bag
ဘိလပ်မြေအဆောက်အအုံစက်မှုလုပ်ငန်း၏လျှောက်လွှာ: အဘိလပ်မြေစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုအများအပြားလင့်များရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်၏နေပါစေရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလွန်မြင့်မားကြောင်း, ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်,...
ရေချိုးနိုင်သော polyester ဒြပ်ဆေးရွက်ကြီးမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု Anti-မှုတ်မြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းတွင်အဘို့အ polyester ဖိုင်ဘာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
non ယက်အပ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအတွက်ဖုန်ငွေကောက်ခံ Antistatic ဖုန် Filter ကိုအိတ်ခံစားခဲ့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
polyester dustproof filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်မှုန့်အိတ် polyester filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခိုင်မာတဲ့ polyester ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ polyester / PE ရေနှင့်ရေနံတွန်းလှန် filter ကိုအိတ်: အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေအထောက်အထား polyester ဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
hot ရောင်းလေဟာနယ် polyester သန့်စင် filter ကိုဖုန်မှုန့်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးကောင်း 80% polyester လေဟာနယ်သန့်စင်ဖုန်မှုန့်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆန့်ကျင် - ငြိမ်ဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ from China, Need to find cheap Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Anti ငြိမ် Polyester အပ်ခံစားခဲ့, We'll reply you in fastest.